यस्तो छ ऋषिपञ्चमीको शास्त्रीय व्रतकथा
Friday, 14 Sep, 2018 8:06 AM
२९ भदौ, काठमाडौं । तीज तथा हरितालिकाको जति महत्व छ त्यति नै महत्व ऋषिपञ्चमीको पनि छ । पौराणिक कथनअनुसार नारीहरु रजस्वला हुदा जानेर वा नजानीकनै गरिएका जति पनि पापहरु छन् तीबाट मुक्ति पाउनका लागि यसको व्रत गर्दछन । श्रीमद्भागवत, गरुड पुराणलगायत अन्य पुराणहरुमा लेखिएअनुसार देवराज इन्द्रलाई ब्रह्महत्याबाट लागेको पापलाई मुक्त गर्नका लागि चार भाग लगाई एक भाग नारीहरुको मासिक रक्तमा प्रवेश गराएकोले त्यसैका कारण उनीहरु चौथो दिनसम्म अशुद्ध रहन्छन् । यसै रजस्वलाबाट नै नारीहरूमा सन्तानोत्पादन गर्नसक्ने शक्ति उत्पन्न भएको मानिन्छ । सम्पूर्ण मानवीय चक्रको सुरुआत नै नारीको मासिक रजस्वलाबाट सुरु हुन्छ । यस पर्वमा व्रतालु महिलाहरूले नदी, ताल, पोखरी लगायतका जलाशयमा ३ सय ६५ वटा दतिवनले दात माँझेर , चोखो माटो, तील र गोबर लगाई स्नान गर्ने र चोखो वस्त्र पहिरेर मध्याह्नमा अरून्धती सहित सप्तऋषिको षोडशोपचार विधिले पूजा गरी ब्राह्मणलाई दानदक्षिणा दिने र कर्कलाको तरकारी बनाई एकछाक खाना खाने गर्दछन् ।
एकपटक विदर्भ देशमा उत्तङ्क नामका ब्राह्मण आफ्नी पतिव्रता पत्नीका साथमा निवास गर्दथे । उनको परिवारमा एउटा पुत्र र एउटी पुत्री थिए । पुत्रको नाम सुविभूषणथियो, नामजस्तै ऊ बुद्धिद्वारा विभूषित थियो । ब्राह्मणले आफ्नी छोरीको विवाह एकजना असल ब्राह्मणसँग गरिदिएका थिए तर भाग्यवश उनकी पुत्री विधवा हुन पुगेकी थिइन् । उनी आफ्नो वैधव्य माइतमैं बसेर गुजार्दै थिइन् । उत्तङ्क ब्राह्मण आफ्नो आउँदो वृद्धावस्था र दुःखी कन्यालाईसमेत लक्षित गरी पुत्रलाई घरव्यवहार जिम्मा लगाएर आफ्नी स्त्री र पुत्रीका साथमा गङ्गाका तटमा आश्रम बनाएर बस्न थाले । कन्याले पनि आफ्ना वृद्ध मातापिताको सेवाका साथै आफूलाई ईश्वर आराधनामा लगाउन थालिन् । एक दिन दिनभरि काम गरेर थाकेकी ती ब्राह्मणपुत्री आश्रम नजिकै एउटा ढुङ्गोमा अडेस लागेर आराम गर्ने उद्देश्यले पल्टिइन् ।
आधा रातमा ती कन्या निदाएकै बेला उसको शरीरमा किरा उत्पन्न भए । बिहान बिउझँदा आफ्नी छोरीको शरीरमा किरा परेको देखेर ब्राह्मणी असाध्यै विलाप गरी रुन थालिन् र रूँदारुँदै बेहोस भइन् । होश फर्किएपछि कन्यालाई बोकेर आफ्ना पति ब्राह्मण उत्तङ्क ऋृषि भए ठाउँमा लिएर गइन् अनि पुत्रीको अवस्था किन त्यस्तो हुन गयो भनी अनुरोध गरिन् । ब्राह्मणीका कुरा सुनेर उत्तङ्कले आफ्ना आँखा थुनी ध्यानदृष्टिले विचार गरी भने–हाम्री छोरी पूर्वजन्ममा कुनै एउटी ब्राह्मणी थिइन् । यिनले एक पटक रजस्वला हुँदा घरका समस्त भाँडाकुँडा चलाउनुका साथै स्पृश्यास्पृश्यको ख्यालै राखिनन् ।
यत्ति दोषका कारण यस जन्ममा यिनको शरीरमा किरा परेका हुन् । शास्त्रअनुसार रजस्वला भएर बिटुलिएका स्त्रीहरू पहिलो दिन चण्डाल्नी, दोस्रो दिन ब्रह्मघाती, तेस्रो दिन पवित्र धोबिनीसमान हुने गर्दछन् र चौथो दिन स्नानपश्चात् शुद्ध हुने गर्दछन् । घरव्यवहारमा शुद्ध मानिए पनि पाँचौं दिनमा मात्र देवकार्यका निम्ति र सातौ दिनमा पितृकार्यका निमित्त योग्य हुने गर्दछन् । पछि जब ऋषिपञ्चमीको व्रतको अवसर प्राप्त भयो र आफ्ना सँगीसाथीले व्रत लिन सुझाव दिँदा समेत वास्ता गरिनन् । व्रत र पूजाआजाको दर्शन मात्रले गर्दा यिनले ब्राह्मण कुल प्राप्त गरिन् । तर यिनले व्रत लिन तिरस्कार गरेकी हुनाले यिनको शरीरमा किरा परे । ब्राह्मणीले पतिका कुरा सुनेपछि यस्तो आश्चर्यमय व्रतका बारेमा, जुन लिनासाथ पाप नष्ट हुने गर्दछ, हजुरले कृपा गरी मलाई बताउनुहवस् । त्यसपछि श्री कृष्णले युधिष्ठरलाई सुनाउनुभएको कथा ब्राह्मणले पत्नी र पुत्रीलाई सुनाए ।
सत्ययुगमा विदर्भ नगरीमा श्येनजित नामक राजा सुखपूर्वक राज्य गर्दथे । ती ऋृषितुल्य थिए । उनको राज्यमा एक जना सुमित्र नामका कृषक थिए । किसानकी पत्नीको नाम जयश्री थियो, उनी अत्यन्त पतिव्रता थिइन् ।
एकपटक वर्षा ऋृतुमा खेतीको काममा व्यस्त रहेका बेला ती रजस्वला भइन् । उनले आफू नछुने भएको त थाहा पाइन् तर त्यसलाई वास्ता नगरी उनी आफ्नो काममा खटी रहिन, छोइछिटोमा पनि यादै गरिनन् । समय बित्दै गयो । आयु पूर्ण भएपछि ती दुबै मृत्युवरण गर्न पुगे । अर्को जन्ममा रजोवती हुँदा नियम र मान्यतालाई पालना नगरेकाले जयश्रीले कुकुर्नी भएर र परसरेकी स्त्रीको सम्पर्कमा आउनाले सुमित्रले गोरु भएर जन्मनु पर्यो । बास्तबमा ऋृतुदोषबाहेक ती दुबैले केही अपराध र पापकर्मा गरेकै थिएनन् । उनीहरूलाई पूर्वजन्मका समस्त विवरणको सम्झना थियो । संयोगले ती दुबै कुकुर्नी र गोरुका रूपमा आफ्नै छोरो सुचित्रका घरमा बस्नथाले । उनीहरूको छोरो धर्मात्मा थियो । ऊ शास्त्रीय मर्यादालाई पालना गर्नुका साथै समस्त जीवजन्तुमा समेत दयाभाव राख्दथ्यो । एकपटक आफ्ना पिताको श्राद्धका दिन उसले ब्राह्मणभोजनका लागि ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेको थियो र उसकी पत्नी उक्त प्रयोजनका लागि अनेक परिकार तैयार गर्न व्यस्त थिई । त्यसै समयमा उसकी स्त्री कुनै काम विशेषले भान्साबाट बाहिरिएकै अवसरमा एउटा सर्पले भान्साघरमा प्रवेश गर्यो र पायस पकाएको भाँडोमा विष वमन गरेर अलप भयो । उता कुकुर्नीका रूपमा ढोकामा बसेकी सुचित्रकी आमाले त्यो घटनालाई नियाली रहेकी थिइन् ।
आफ्ना छोराबुहारीलाई ब्रह्महत्याको पापबाट जोगाउन त्यस कुकुर्नीले बुहारी भान्सामा फिर्ता आएपछि उसले देख्दादेख्दै त्यस खिरको भाँडोमा मुख गाडिदिई । सुचित्रकी पत्नी चन्द्रवतीले कुकुर्नीको त्यो कृत्य देख्न सकिन र उसले चुलोबाट बल्दै गरेको दाउरो झिकेर त्यस कुकुर्नीलाई हिर्काई । कुटाइ र पोलाइबाट तिलमिलाएकी त्यो कुकुर्नी यताउता कराउँदै कुद्न थाली । सम्पूर्ण पक्वान्न फ्यालेर सुचित्रकी पत्नीले पुनः खाद्यसामाग्री तयार गरी ब्राह्मणभोजन गराई ।
ब्राह्मणहरू आशीर्वाद प्रदान गर्दै ती जोइपोइसित विदावारी भैइ आआफ्ना गन्तव्यतर्फ लागे । उता दिनभरि व्यस्तरहँदा र कुकुर्नीको कृत्य सम्झँदै त्यस दिन कुकुर्नीलाई खान पनि दिएनन् भने गोरुलाई पनि घाँस हाल्न बिर्सिए । राती भोक र प्यासले व्याकुल भई त्यो कुकुर्नी गोरुका रूपमा रहेका आफ्ना पतिसामु गई बिलौना गर्न थाली– हे स्वामी! आज म असाध्यै भोकाएकी छु, हुन त मेरो छोरो सधैं मलाई बोलाएर खानेकुरा दिने गथ्र्यो, तर आज सम्झँदा पनि सम्झिएन । छोराबुहारीलाई ब्रह्महत्याको दोष नलागोस् भनेर मैले विषयुक्त भोजनमा जुठो हालेकाले वास्तविकता नबुझी बुहारीले पनि बेस्सरी कुटी । पत्नीका कुरा सुनेर त्यस गोरुले भन्यो –हे भद्रे! तेरा पापका कारणले नै म पनि आज यस योनिमा जन्मन पुगें अनि भारी बोक्दाबोक्दा हत्तुहैरान भैसकें ।
आज त अझ बढी भारी बोक्नु परेकाले मेरो कम्मरै भाँचिएको छ । अझ मैले यस्तो अवस्थामा समेत आज दिनभरि हलो जोत्नु पर्यो । कार्यव्यस्तताले हो कि किन हो आज मलाई घाँसपात समेत दिएको छैन । विचरा उसले हामीलाई चिनेको छैन, हाम्रै लागि गरेको आजको श्राद्ध पनि हाम्रो अपकार भएकाले निष्फल हुनेभयो । सुचित्र धर्मात्मा थियो, ऊ पशु बोलीलाई बुझ्दथ्यो । उसले कुकुर्नी र गोरुको संवादलाई प्रष्ट सुन्यो र ती दुई त आफ्ना बाबुआमा भएको थाहा पायो । त्यसपछि सर्वप्रथम उसले दुबैसित क्षमायाचना गर्दै पेटभरि खान दियो । अनि मातापिताको दुःख निवारणको उपाय पत्ता लगाउन ऊ वनतर्फ प्रस्थान गर्यो । वनमा गएर ऋृषिहरूसँग जिज्ञाशा राख्यो– मेरा मातापिता कुनकुन कर्मका कारणले यस्तो नीच योनिमा प्राप्त भएका हुन् र अब कसरी वहाँहरूले छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ ।
किसानपुत्र सुचित्रका जिज्ञाशा सुनेपछि ऋषिसमूहमा व्यापक चिन्तनमनन भयो । अन्त्यमा ती मध्ये एकजना सर्वतमा नामक ऋृषिले भने– हे भद्र! तिमी आफ्ना मातपिताको मुक्तिका निमित्त पत्नीसहित भई ऋृषिपञ्चमीको व्रत लेऊ र त्यसको फल आफ्ना माता–पितालाई अर्पण गरिदेऊ । भाद्र महिनाको शुक्लपक्षको पञ्चमीका दिन शुद्धाचरण गरी मध्यान्हकालमा नदीको पवित्र जलमा स्नान गर्नू र नयाँ रेसमी लुगा लगाएर अरूधन्तीसहित सप्तऋृषिहरूको पूजा गर्नू । ऋषिका यस्ता आज्ञा प्राप्त गरेपछि सुचित्र आफ्नो घर फर्कियो र आफ्नी पत्नीसहित विधिविधानपूर्वक पूजा र व्रत गर्यो । यसको पुण्य मातापितालाई समर्पण गरेपछि ती दुबै पशुयोनिबाट मुक्त भए ।
त्यसैले जुन स्त्रीले श्रद्धापूर्वक ऋृषिपञ्चमीको व्रत लिन गर्दछिन, ती समस्त सांसारिक सुखलाई भोग गरी अन्त्यकालमा वैकुण्ठ पुग्दछिन् । जुन स्त्रीले रजस्वला हुँदा घर नित्यकर्ममा संलग्न हुने गर्दछिन तिनले नरक जानुपर्दछ, किनकि पूर्वजन्ममा वृत्रासुरको बधको परिणामले इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको महान् पाप लागेको थियो । त्यस समय ब्रह्माजीले इन्द्रमाथि कृपा गर्दै त्यस पापलाई चार स्थानमा बाँडे । पहिलो अग्निमा (धुँवामिश्रित प्रथम ज्वालामा), दोस्रो नदीमा(वर्षाकालको गाँज र मैलोयुक्त पानी), तेस्रो पर्वतमा(जहाँ लस्सेदार वृक्ष उत्पन्न हुन्छन) र चौथो स्त्रीमा (रजस्वला अर्थात् मासिक धर्ममा) । स्त्रीमा रहेको यही ब्रह्महत्याको दोष निवारण गर्न प्रत्येक स्त्रीले ऋषिपंचमीको व्रत गर्नु अनिवार्य छ । पतिदेवका मुखारविन्दबाट ऋषिपञ्चमीको महात्म्य सुनेर ती ब्राह्मणी र उनकी छोरी दुबैजनाले विधिविधानपूर्वक ऋषिपञ्चमीको व्रत लिए र उक्त व्रतको प्रभावले कन्याको शरीर स्वस्थ भयो । तिनीहरूले जीवनभरी सुखसम्मृद्धि पाउनुका साथै मरणोपरान्त उत्तमलोक प्राप्त गरे ।